Qurxinta Kirismaska ​​ee Hubrig Volkskunst - Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt Qurxinta Kirismaska ​​Hubrig Volkskunst | Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt
Bogga ugu weyn Qurxinta Kirismaska ​​Hubrig Volkskunst
Qurxinta Kirismaska ​​Hubrig Volkskunst
Shirkadda Hubrig Folk Art, oo ku taal Zschorlau oo ku taal gobolka quruxda badan ee Galbeedka Ore Mountains, waa mid ka mid ah magacyada hormuudka u ah marka laga hadlayo malaa'igta iyo muuqaalada kale. Hubrig Volkskunst wuxuu had iyo jeer ka taxadaray inuu abuuro mowduucyo, kuwaas oo aan ku habboonayn oo keliya waqtiga kirismaska.
Sidaa darteed, tirooyinka Hubrig waa la soo bandhigi karaa xilliyada oo dhan. Jacayl, ciyaar iyo midabbo, kuwani waa astaamaha ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'Hubrig figurines'. Taxanaha Hubrigs "aruurinta sanadka oo dhan" wuxuu ku soo bandhigayaa Hubrigs afarta xilli xilli fasiraado yar yar, oo ka turjumaya muuqaal yar oo muuqaal ah xilligii u dhigma. Muuqaalka maypole ee guga, lamaane isjecel kursiga keydka xagaaga, waqtiga goosashada deyrta. Taxanaha yar ee Hubrig afarteeda xilli waxaa dhameystiray jawiga qaboobaha. Dhammaan alaabooyinka waa dabcan 100% gacmo rinji ah oo ugu wanaagsan tayada Hubrig.
qiimaha joogtada ah $ 2695 $ 26.95
Dukaameysiga Hubrig Jiilaalka Carruurta 3 inji Jarmal gacan ku sameys ah
qiimaha joogtada ah $ 5995 $ 59.95
Hubrig Folk Art Winter Waad ku mahadsantahay gacaliye Santa Claus 3.5 inji dherer Jarmal ah oo gacmo lagu qurxiyo
qiimaha joogtada ah $ 2499 $ 24.99
Cunuga Cirka "Qalbiyada Sanjabiisha" 2.6 inji dherer Jarmal ah oo gacmo lagu sameeyay Qurxinta
Hubrig Jiilaalka Drummer 3.5 inji dheer Jarmal gacan ku samays ah
qiimaha joogtada ah $ 3995 $ 39.95
Hubrig Ilmaha Hadiyadda Jiilaalka 3.2 inji Jarmal gacan ku sameys ah
qiimaha joogtada ah $ 5595 $ 55.95
Hubrig Jiilaalka Carruurta 'Hurray Santa Claus' ayaa imanaya 3.2 inji Jarmal gacan ku sameys ah
qiimaha joogtada ah $ 6995 $ 69.95
Hubrig Jarmal Sigaar-cabayaal Santa 8inch Udgoon
qiimaha joogtada ah $ 25995 $ 259.95
Hubrig Ahraamta Carruurta Jiilaalka ah 35 x 25 cm 1-tier ee shumaca iyo shumaca shumaca
qiimaha joogtada ah $ 4795 $ 47.95
Sigaar Qiijiye Gacmeed - Santa Claus - 5.5 inji
qiimaha joogtada ah $ 4495 $ 44.95
Hubrig Sigaar-cabista Gnome - Macallin Baraf Ski ah 14 cm Gubashada Caanaha
qiimaha joogtada ah $ 4695 $ 46.95
Hubrig Winter Boy oo wata Snowman 4.3 inji Jarmal gacan ku sameys ah